Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Japan » Ihe mbụ gbasara COVID-19 kọrọ na Tokyo Olympic Village
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • nzukọ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Egwuregwu ndị ahụ, kagburu afọ gara aga n'ihi ọrịa zuru ụwa ọnụ COVID-19, ezubere ka enwee na-enweghị ndị na-ekiri ya na n'okpuru usoro iwu ahụike siri ike n'etiti July 23 na August 8.
Nnọọ mbụ coronavirus ikpe ke Olympic Village kọrọ n'oge echetakwa ule.
N'oge gara aga, onye nnọchi anya ndị Naijiria nọ na 60s ghọrọ onye mbịambịa mbụ na egwuregwu ndị ụlọ ọgwụ na COVID-19.
Ndị ọchịchị na-anwa ịchọta onye na-ebu arọ nke Uganda, bụ onye na-enweghị egosi maka ule COVID-19 wee pụọ n'ụlọ ime ụlọ ya.
The Egwuregwu Olympic Tokyo 2020 ndị isi kwuru na ọkwa mbụ nke COVID-19 ka a kọọrọ na Olympic Village na Tokyo, Japan nanị ụbọchị asaa tupu egwuregwu amalite ụbọchị. Ememme a ga-amalite na July 23 ma dozie ya na-enweghị ndị na-ekiri ya na n'okpuru usoro nlekọta ahụike siri ike.
"Nke ahụ bụ nke mbụ ikpe na Village nke a kọọrọ n'oge ule nyocha," Masa Takaya, ọnụ na-ekwuchitere kọmitii na-ahazi, kwuru taa.
Tokyo 2020 Onye isi ụlọ ọrụ Toshiro Muto kwupụtara na onye bu ọrịa a bụ onye mba ọzọ so na-ahazi egwuregwu a. E gosipụtaghị mba onye ahụ, n'ihi nchegbu onwe ya.
Ndị mgbasa ozi Japan kwukwara na onye nnọchi anya Naijiria nke nọ na 60s ghọrọ onye mbịambịa mbụ na egwuregwu ndị ụlọ ọgwụ nọ na COVID-19. Onye ahụ nyochara nke ọma maka nje ahụ na ọdụ ụgbọ elu na Tọzdee ma kwenye ya n'ụlọ ọgwụ.
Ndị ọchịchị Japan na-anwa ịchọta nwatakịrị dị afọ 20 nke Uganda, Julius Ssekitoleko, bụ onye na-enweghị ihe ngosi maka nnwale COVID-19 wee pụọ na họtel ya na Izumisano, Osaka, ụnyaahụ. O kwuru na ọ hapụrụ ederede na-ekwu na ọ chọghị ịlaghachi Uganda.
Tokyo ga-anọ n'okpuru ọnọdụ mberede maka oge asọmpi a n'ihi ịrị elu ọrịa na-efe efe. Isi obodo Japan nyere akụkọ ikpe 1,271 ụnyaahụ, nke bụ ụbọchị nke atọ nke mmụba kwa ụbọchị gbagoro 1,000.
Otu ìgwè nke ngagharị iwe gafere ebe egwuregwu Olympic na Tokyo na Fraịde, na-ekwu ka akagbu egwuregwu ahụ.
Ntuli aka mba na nso nso a gosiri na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị Japan chọrọ ka a kwụsị ma ọ bụ yigharịa Egwuregwu ahụ, ebe 78% nke ndị zaghachiri na-ekwu na ha megidere Egwuregwu na-eme n'agbanyeghị agbanyeghị ọrịa COVID-19.